ယေရှု၏ငယ်ဘဝသည်မည်သို့ဖြစ်သနည်း။ Online Online️အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေပါ
ယေရှု၏ငယ်ဘဝသည်မည်သို့ဖြစ်သနည်း။ သခင်ယေရှု၏သတင်းစကား၊ သူမည်သို့နေထိုင်ပုံ၊ ၎င်းထက်မည်သို့သေဆုံးသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ သမိုင်းတွင်အရေးအပါဆုံးဇာတ်ကောင်၏အသက်သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှပါမောက္ခများ၊ သမိုင်းဆရာများ၊ ဘာသာရေးပညာရှင်များနှင့်ယုံကြည်သူများလေ့လာသောဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ el Mundoမရ။ သို့သော်သူ၏အသက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောတစ်ခုတည်းသောသတင်းကိုတွေ့နိုင်သည် ခရစ်ဝင်ကျမ်းများအဓိကအားဖြင့်ဘဝနောက်ဆုံးသုံးနှစ်ကိုအာရုံစိုက်နေသော၊ သူ၏ကလေးဘဝအားလုံးကိုနောက်ခံ၌ထားခဲ့သည်။
ဧဝံဂေလိတရား၏ရည်ရွယ်ချက်သည်ဇာတ်ကောင်၏ပြည့်စုံသောအတ္ထုပ္ပတ္တိကိုပြုလုပ်ရန်မဟုတ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲမှတ်ထားရမည် သူမထုတ်ချင်တဲ့သတင်းစကားကိုအာရုံစိုက်ပါ၎။ ထို့ကြောင့်၊ သမ္မာကျမ်းစာကမသက်ဆိုင်သောကြောင့်သူ၏ကလေးဘဝအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပါသည်။
သို့သော်ဧဝံဂေလိဆရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထားခဲ့သည် အချို့သောအချက်အလက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားယေရှု၏ငယ်စဉ်ဘ ၀ ကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ခွင့်ပြုသောအချက်အလက်အချို့ဖြစ်သည်သူဘယ်မှာမွေးပြီးဘယ်လိုပညာရေးမျိုးရခဲ့လဲ။
1.2 ၁၂ နှစ်နှင့်အတူယေရှု၏ဖြစ်ရပ်မှန်
ယရှေုသညျ ယုဒပြည်ဗက်လင်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်မရ။ တော်ရုံတန်ရုံနှစ်မှာတော်သေးတာပေါ့။ သူ၏မွေးသက္ကရာဇ်အတိအကျနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲလွဲချက်များရှိသည်၊ သို့သော်သူ၏မွေးဖွားခြင်းကိုနန်းစံနောက်ဆုံးနှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဟေရုဒ်.
အ ယေရှု၊ Maria နှင့်Joséတို့၏မိဘများသူတို့သည်နာဇရက်မြို့၌နေခဲ့ကြသော်လည်းဘုရင် Caesar Augustus ၏အမိန့်ကိုလိုက်နာရန် Bethlehem သို့သွားခဲ့ရသည်။
ထိုနှစ်များတွင်မဟာဟေရုဒ်အမည်ရှိဘုရင်တစ်ပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများအရအရှေ့အရပ်မှပညာရှိများကသူ့ကိုလှောင်ပြောင်ပုံကိုသူမြင်သောအခါယုဒတွင်နေထိုင်သောအသက်နှစ်နှစ်အောက်ကလေးများအားလုံးကိုသေဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယေရှုနှင့်သူ၏မိဘများသည်အီဂျစ်ပြည်သို့ထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။ သို့သျောလညျး သရက် သေခြင်း ဟေရုဒ်မှမိသားစုသည်နာဇရက်မြို့သို့ပြန်လာခဲ့ကြသည်မရ။ အဲဒီမှာယေရှုကြီးပြင်းလာပြီးသူ့အချိန်ကဘယ်ကလေးမဆိုပုံမှန်ကလေးဘဝကိုရခဲ့တယ်။ သူသည်တရားဇရပ်များတွင်လေ့လာခဲ့ပြီးအခြားဂျူးကလေးငယ်များကဲ့သို့ဖခင်ထံမှကုန်သွယ်မှုကိုသင်ယူခဲ့သည်။
ဟေရုဒ်မင်းသေသော်လည်း၊ ထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်အဲဂုတ္တုပြည်၌အိပ်မက်၌ယောသပ်အားထင်ရှား။ ၊
ဆိုလော့၊ ထ။ သူငယ်နှင့်အမိကိုခေါ်။ the သရေလပြည်သို့သွားလော့။ သေဆုံးသူများသည်ကလေး၏သေခြင်းကိုရှာဖွေသောသူများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သူသည်ထ။ သူငယ်နှင့်အမိကို ယူ၍ theသရေလပြည်သို့ရောက်လေ၏။
အာခလုသည်ခမည်းတော်ဟေရုဒ်မင်းအစားယုဒပြည်၌စိုးစံကြောင်းကိုကြားလျှင်၊ ထိုအရပ်သို့မသွားဝံ့ဘဲအိပ်မက်များအားဖြင့်သတိ ပေး၍ ဂါလိလဲပြည်သို့သွား၏။
သူသည်နာဇရက်မြို့သားဟုခေါ်ခြင်းငှါပရောဖက်တို့ပြောသောစကားပြည့်စုံမည်အကြောင်း၊ နာဇရက်မြို့၌ နေ၍ နေ၏။
မ2ဲ ၁၉း၄-၆
သမ္မာကျမ်းစာပြပွဲများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သောတစ်ခုတည်းသောပုံတိုပတ်စ သူသည် ၁၂ နှစ်အရွယ်တွင်ယေရှုသည်ပသခါပွဲကျင်းပရန်မိဘများနှင့်အတူဂျေရုဆလင်သို့သွားခဲ့သည်မရ။ သူ့မိဘများအိမ်ပြန်လာသောအခါယေရှုနောက်မှာကျန်ရစ်ခဲ့သည်ကိုသူတို့သတိမထားမိခဲ့ကြပေ။ သူတို့ကသူသည်အခြားဆွေမျိုးများနှင့်အတူရှိသည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ သုံးရက်ကြာရှာဖွေပြီးနောက်ဗိမာန်တော်၌ကောင်လေးနှင့်ဥပဒေဆရာများ၏မေးခွန်းများကိုနားထောင်ပြီးမေးခွန်းများမေးကြသည်။မရ။ သူ့မိဘတွေကသူတို့ကိုဂရုမစိုက်တာကြောင့်သူ့ကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့ပေမယ့်သူပြန်ပြောခဲ့တယ် သူကသူ့အဖေအိမ်မှာ
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းယေရှု၏မိဘများသည်ပသခါပွဲအတွက်ဂျေရုဆလင်သို့သွားကြသည်။ သူသည်ဆယ့်နှစ်နှစ်အရွယ်တွင်ထုံးစံအတိုင်းထိုနေရာသို့သွားကြသည်။ ပွဲပြီးသောအခါသူတို့သည်ပြန်ရန်ခရီးကိုစခဲ့ကြသော်လည်းယေရှု၏မိဘများသတိမပြုဘဲဂျေရုဆလင်တွင်ရှိနေခဲ့သည်။ သူတို့သည်ခရီးသွားအုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်သည်ဟုထင်ပြီးသူတို့ကဆွေမျိုးများနှင့်အသိမိတ်ဆွေများကြားတွင်တစ်နေ့တာခရီးတစ်ခုထွက်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုမတွေ့ဘူး၊ သူ့ကိုရှာဖို့ဂျေရုဆလင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ သုံးရက်အကြာမှာဆရာတွေအလယ်မှာထိုင်နေတာ၊ သူတို့ကိုနားထောင်ပြီးမေးခွန်းတွေမေးကြတယ်။ သူ့ဆီကကြားရတဲ့သူအားလုံးဟာသူ့ရဲ့အသိဥာဏ်နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအံ့သြနေကြတယ်။ သူ့မိဘများကသူ့ကိုမြင်သောအခါအံ့သြသွားကြသည်။
"သား၊ မင်းကငါတို့နဲ့ဘာလို့ဒီလိုပြုမူနေတာလဲ" သူမအမေကသူမကိုပြောတယ်။ ကြည့်ပါ၊ မင်းအဖေနဲ့ငါကမင်းကိုစိတ်ပူပန်စွာနဲ့ရှာနေတာ!
လုကာ ၁၇: ၁၁-၁၉
သူ၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်ငါတို့ပြောခဲ့သောပုံတိုပတ်စများ မှလွဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောတစ်ခုတည်းသောသတင်းအချက်အလက်မှာထိုအရာဖြစ်သည် ယေရှုသည်အရွယ်အစား၊ ဉာဏ်ပညာနှင့်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုကြီးပွားစေသောနာခံတတ်သောကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
လူးကပ်စ 2: 40
ထို့ကြောင့်ယေရှုသည်မိဘများနှင့်အတူနာဇရက်မြို့သို့ သွား၍ သူတို့လက်အောက်ခံနေခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်သူမရဲ့အမေကဒီအရာတွေအားလုံးကိုသူမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ သခင်ယေရှုသည်ဉာဏ်ပညာနှင့်အရပ်အမောင်း၌ကြီးပြင်းလာခဲ့ပြီးဘုရားသခင်နှင့်လူသားအားလုံး၏မျက်နှာသာကို ပို၍ ပို၍ ခံစားခဲ့ရသည်။
သူ၏ငယ်ဘဝကိုကိုးကားစရာအနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုယေရှုဟုထင်စေသည် ဟေဗြဲဘာသာကိုဖတ်နိုင်ပြီးကျမ်းချက်များကိုကောင်းစွာသိနိုင်သည်မရ။ သူသည်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကိုဖတ်။ နားလည်ရန်ရရှိသောဂျူးကလေးငယ်တိုင်းရရှိသောအခြေခံပညာရေးကိုရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည်အခြားရဗ္ဗိများကဲ့သို့ကြီးကျယ်သောလေ့လာမှုများမလုပ်ခဲ့ပေ။ သူ၏ဉာဏ်ပညာသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံသောသူ၏ဘ ၀ မှလာသည်။
သူသည်ကြီးပြင်းလာသည့်နာဇရက်မြို့သို့ သွား၍ စနေနေ့တွင်သူ၏ထုံးစံအတိုင်းတရားစရပ်သို့ ၀ င်လာခဲ့သည်။ သူသည်စာဖတ်ရန်ထသည်။
လူးကပ်စ 4: 16
ယေရှုသည်သူ၏ဖခင်ကဲ့သို့လက်သမားဖြစ်သည်။ သူသည်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင်ဂျူးမိသားစုများ၏ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်းသင်ကြားပေးသောယောသပ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင်ရိတ်သိမ်းခြင်းကဲ့သို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများသည်မိသားစုများနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
La စာရိတ္တပညာရေး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် သူတို့ရဲ့မိဘတွေရဲ့တာဝန်မရ။ မိဘတွေရဲ့အခန်းကဏ္wasကသူတို့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပြုမူပုံနဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘ ၀ မှာဘုရားသခင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဘယ်လိုသွန်သင်ဖို့လဲ။
ယေရှုမဟုတ်ဘူး သူသည်ငယ်စဉ်ကအံ့သြဖွယ်ရာများမလုပ်ခဲ့ပါ။ အ ပထမဆုံးအံ့ဖွယ်အမှု ယေရှု၏အချိန်ဖြစ်သည် ရေကိုဝိုင်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်သည်သူ၏နှစ်ခြင်းခံပြီးနောက်သူသည်အသက် ၃၀ ခန့်ရှိပြီ။ ယေရှု၏ကလေးဘဝသည်ထိုအချိန်ကအခြားမည်သည့်ကလေးမဆိုပုံမှန်ဖြစ်သည်။
ဤအရာကိုသူ၏ပထမ ဦး ဆုံးလက္ခဏာများကိုဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့၌ယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သူ၏ဘုန်းအသရေကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ပြီးတပည့်တော်များကသူ့ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။
ယေရှုတရားဟောတာကိုမြင်ပြီးအံ့သြစရာတွေလုပ်ပြတဲ့အခါယေရှုရဲ့ဆွေမျိုးတွေကအရမ်းအံ့သြသွားကြတယ်။ သိသာပါတယ်၊ သူတို့ကသူသည်မေရှိယဟုသံသယ ၀ င်စရာအကြောင်းတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဖူးပေမရ။ သူသည်ကလေးဘဝ၌အံ့ဖွယ်အမှုများပြုလုပ်ခဲ့လျှင်သူ၏ဓမ္မအမှုတွင်မည်သူမျှအံ့သြသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
"သူကဒီလိုအရာတွေကိုဘယ်ကနေရခဲ့တာလဲ" သူ့ကိုကြားဖူးသူအတော်များများကအံ့သြတကြီးနဲ့ပြောတယ်။ မင်းပေးတဲ့ပညာကဘာလဲ။ သူ၏လက်မှလာသောအံ့ဖွယ်အမှုများမည်သို့ရှင်းပြသနည်း။ သူသည်မာရိ၏သား၊ ယာကုပ်၊ ယောသပ်၊ ယုဒ၊ ရှိမုန်တို့၏လက်သမားမဟုတ်လော။ မင်းအစ်မတွေငါတို့နဲ့အတူမရှိဘူးလား။
မာကု ၇: ၂၁-၂၂
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! ဒီဆောင်းပါးကမင်းကိုနားလည်ပေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ယေရှု၏ငယ်စဉ်ဘဝကဘယ်လိုလဲမရ။ သင်ယခုသိလိုလျှင် ယုဒသည်ယေရှုကိုသစ္စာဖောက်သောအကြောင်းပြချက်ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည် Discover.online ။